Warshadda Shiinaha iyo kuwa soo saareyaasha SJJ
Tirtiryadu waxay lagama maarmaan u yihiin khaanadda qalabka wax lagu qoro ama kiiska qalinka, kaas oo masixi doona guuldarooyinkaaga iyo dhammaan khaladaadkii aad samaysay ilaa maanta. Eraser -ka ayaa ah qalabka miiska ee muhiimka u ah ardayda waxayna isticmaali karaan marka ay wax sawirayaan, sawirayaan ama wax hagaajinayaan.
Tirtirids ayaa muhiim u ah khaanadda qalabka wax lagu qoro ama kiiska qalinka, kaas oo masixi doona guuldarooyinkaaga iyo dhammaan khaladaadkii aad samaysay ilaa maanta. Tirtirids ayaa ah qalabka miiska ee muhiimka u ah ardayda waxayna isticmaali karaan inta ay wax sawirayaan, sawirayaan ama wax hagaajinayaan.
Dhammaan xayeysiisyadeena tirtiriyeyaashaloogu talagalay carruurta waxaa laga sameeyay walxo aan sun ahayn, markaa uma baahnid inaad ka walwasho in carruurtu dhibaato kala kulmaan. 100% walxo aan sun ahayn, u hoggaansan EN71, CPSIA, ASTM, REACH heerarka imtixaanka. Naqshad gaar ah iyo noocyo kala duwan oo xirmo ah ayaa la heli karaa.
Ku habboon da 'kasta
Qiimayaal macquul ah
La kulan cimri dherer maalinle ah
Walxaha TPR ee aan sun ahayn
Ku soo dhowow adeegga OEM
Xiga: Qalinka Ball Ball
tirtiriyeyaasha caadada ah
tirtiriyeyaasha caadadu samaysay
tirtiriyeyaasha leh astaanta caadada ah
masixiyeyaasha leh astaanta daabacan
tirtiriyeyaasha aan sunta ahayn